China Deep Groove Ball Ukunikela ifektri abakhiqizi | I-Shallow Yong
I-deep groove ball bearing uhlobo oluvame kakhulu lokuthwala okugoqekayo. Ibhola eliyisisekelo le-groove elijulile linendandatho yangaphandle, iringi yangaphakathi, iqoqo lamabhola wensimbi kanye nesethi yohlaka lokugcina. Isakhiwo salo silula, sisebenziseka kalula, ukukhiqizwa okuvame kakhulu, uhlobo olusetshenziswa kakhulu lokuthwala. Amabombo we-deep groove ball angasetshenziswa kumathuluzi wokunemba, amabhokisi wamagiya, izinsimbi, izinjini, izinto zasendlini, izinjini zangaphakathi zomlilo, izimoto zokuhamba, imishini yezolimo, imishini yokwakha, imishini yobunjiniyela, yo yo, njll.
Kunezinhlobo ezimbili zamabombo we-groove ball ejulile: irowu eyodwa nomugqa ophindwe kabili. Isakhiwo sebhola le-groove elijulile nalo lihlukaniswe laba yisakhiwo sophawu nesivulekile. Uhlobo oluvulekile lisho ukuthi ukuthwala akunaso isakhiwo sokuvala, futhi kufakwe uphawu lwe-groove ejulile ehlukaniswe ngophawu lothuli nophawu lobufakazi. Okokusebenza kwekhava yensimbi yothuli kuyisitampu sensimbi, okungavimbela kuphela uthuli ekungeneni ku-raceway. Uhlobo lobufakazi bukawoyela uphawu lokuthinta uwoyela, olungavimbela ngempumelelo ukugcotshwa kwamafutha ekuphatheni.
Ukufakwa kwebhola okujulile kwe-groove kungokwokuzalela okungahlukaniseki, isakhiwo saso silula, futhi sisetshenziswa kabanzi. Ngaphezu kohlobo oluyisisekelo, i-groove ball bearing ethwele nayo inezakhiwo ezahlukahlukene, njenge: ibhola le-groove ejulile enesembozo sothuli, ibhola le-groove elijulile elinezindandatho zokufaka uphawu lwenjoloba, ibhola le-groove ejulile enebhola lokuma, ibhola eligcwele eligcwele kuthwala ngomthwalo omkhulu wokulayisha negebe lokulayisha ibhola.
Ibhola le-groove elijulile lithwala ikakhulukazi lithwala umthwalo osabalalayo, kepha futhi lingathwala womabili umthwalo osabalalayo nomthwalo we-axial. Ifanele ukusebenza ngejubane elikhulu. Uma ithwala kuphela umthwalo osabalalayo, i-engeli yokuxhumana inguziro. Lapho i-groove ball bearing ethwele inesikhala esikhulu se-radial, inokusebenza kwe-angular contact bearing futhi kungathwala umthwalo omkhulu we-axial. I-coefficient ye-friction ye-deep groove ball bearing incane kakhulu futhi isivinini somkhawulo siphezulu, kepha asifanele ukuthwala umthwalo osindayo. Lapho ukuvuleka kwe-radial kukhulu, umthamo we-axial bearing uyakhuphuka, futhi i-engeli yokuxhumana inguziro ngaphansi kwamandla we-radial amsulwa. Lapho kunamandla e-axial, i-engeli yokuxhumana inkulu kuneqanda.
Ibhola le-groove elijulile lithwala ikakhulukazi lithwala umthwalo osabalalayo, kepha futhi lingathwala womabili umthwalo osabalalayo nomthwalo we-axial. Uma ithwala kuphela umthwalo osabalalayo, i-engeli yokuxhumana inguziro. Lapho i-groove ball bearing ethwele inesikhala esikhulu se-radial, inokusebenza kwe-angular contact bearing futhi kungathwala umthwalo omkhulu we-axial. I-coefficient ye-friction ye-deep groove ball bearing incane kakhulu futhi isivinini somkhawulo siphezulu kakhulu.
Olandelayo: I-Hub Bearing